Sidee dadka naafada ah ay u gaari doonaan Xarunta Altunizade Metrobus Station? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSidee bay dadka naafada ah u gaari doonaan Saldhiga Altunizade Metrobus?
23 / 07 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Xuquuqda dabiiciga ah ee dadka curyaamiinta ah waxay u isticmaalaan gaadiidka dadwaynaha iyagoo la siman muwaadiniinta kale. Inkasta oo joogsiga gaadiidka dadweynaha lagu dhisi doono adduunka oo idil, dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee dadka naafada ah ayaa loo qabtaa si ay u gaaraan meelahaas ugu fudud, haddii loo baahdo, waxaa lagu dhisaa iyaga oo la qabsanaya xaaladaha naafada.
Turkey ayaa sidoo kale ka dhisay xarun ee Istanbul ee Altunizade iyo sabab qaar ka mid marnaba ku fekerin si daciif ah halka loo isticmaalo sano Metrobus Station. Waxay u dhowdahay in qof naafo ah uu gaadho saldhigaas ama qof naafo ah inuu yimaado saldhigga Metrobus. Muxuu IETT u casriyeeynayaa joojintan muddo dheer? Muxuu u dabooli Karin wadooyinka waawayn iyo wadooyinka gaari doona saldhigga, laakiin muwaadiniinta waxaa lagu gubaa kuleyl xagaaga waxayna qoyan tahay roobka xilliga jiilaalka? Maxay tahay sababta aysan u jirin leyliska iyo kor u qaadida naafada?
Si loo muujiyo sida ay u adag tahay in la gaaro xaruntan, waxaanu kormeeray xaaladaha adag ee bilawga ilaa dhammaadka. Waxaan wax ka qabannaa masuuliyiinta IETT: ee Dadka naafada ah, fadlan ka saari caqabadaha!
Khadka tareenka ee Samsun wuxuu gaari doonaa xeebta dadka naafada ah
Gawaarida telefishinka ee Etiler ilaa Altunizade
Bursa Teleferik waxay gaari doontaa Bursaray
Maanta oo Taariikh ah: 18 June1856 Gacanka Iskenderun ee England…
Laba Metrobus ayaa Lagu Arruuriyay Jidka Fikirtepe Metrobus Stop
Kor u qaadida kor u qaadida dhammaan meelaha metrobus ee naafada